“Tani waa waxa dhici lahaa haddii uu Neymar la sii joogi lahaa Barcelona.” – Pep Guardiola – Gool FM
(Manchester ) 27 Abriil 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa muujiyay sida uu ula dhacsan yahay ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr, isagoo carabka ku adkeeyay in Barcelona ay ku guuleysan laheyd labo koob dheeri ah oo tartanka Champions League, haddii ay sii heysan laheyd adeega laacibka reer Brazil.
Manchester City ayaa isku diyaarineysa inay ku wajahdo Paris Saint-Germain semi-finalka tartanka Champions League, Pep Guardiola ayaa ka war qaba in Neymar Jr uu ka mid yahay hubka ugu halista badan kooxda reer France.
Haddaba Pep Guardiola oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Paris Saint-Germain ayaa wuxuu yiri:
“Qof walba oo yaqaana kubada cagta wuu ogyahay tayada Neymar iyo Mbappé, laakiin Paris Saint-Germain ma ahan kaliya labo ciyaaryahan.”
“Waan hubaa hadii Neymar uu sii joogi lahaa Barcelona, ​​Barca waxay ku guuleysan laheyd labo ama seddex Champions League, Messi, Nemar iyo Suarez lama celin karo, waxay ahaayeen seddexdii weerar ee ugu fiicneyd ee aan arko noloshayda.”
Laakiin wuxuu go’aansaday inuu aado Paris, ma ahan go’aan xun, maxaa yeelay waa Magaalo Cajiib ah iyo koox weyn.”
Intaas kaddib Pep Guardiola ayaa wuxuu ka hadlay da’ayarka reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé, wuxuuna yiri:
“Waa laacib tayo leh oo kubada cagta aduunka ay sugeyso, runtii waa astaan ​​Faransiis ah, sababtoo ah wuxuu xulkiisa kula guuleystay koobka adduunka.”